Fanamarinana - Noelson Chemicals Technology Co., Ltd.
Nampiasa anay izahay mba hanompoana anao ary hanatanteraka ny fangatment anao!
Ny kalitao tsara indrindra sy ny serivisy tsara indrindra dia tenin'i Noelson Chemicals. Ny vokatra rehetra ao amin'ny Noelson Chemicals dia amboarina ary omena amina fenitra faran'izay tsara, vokatra kinendry sasany mifanaraka amin'ny fenitra iraisampirenena mifandraika (toy ny fenitry ny American Engineer Teknika Assoclation, fenitra Amerikanina FDA, fenitra RoHS iraisam-pirenena sns.) Amin'ny famokarana sy famatsiana, koa nahazo ny taratasy fanamarinana ISO9001 / 2008 sy Vondrona Eropeana.
Nandritra ny taona maro, Noelson Chemicals Miara-miasa amin'ny SGS, PONY ny fikambanana manandanja fahefana manerantany an'ny antoko fahatelo, mba hiantohana ny kalitaon'ny vokatra hampiorina ary hahatratra ny fenitra iraisampirenena. Noelson Chemicals dia manana biraon'ny sampana sy masoivoho any Japon, Eoropa, Etazonia ary tanàna lehibe any Shina, manome serivisy ara-teknika sy raharaham-barotra feno sy tsara ho an'ny mpanjifa rehetra.